Caqli: Suuq-galyada SEO ee Awesome
Shirkado badan ayaa ka faa'iideysan kara inay yeeshaan shabakad ganacsi oo ay weheliso kanaalada kale ee suuq-geynta. Hirgelinta naqshad dhijitaal ah ayaa suurtogal u ah fursado gaar ah oo loogu talogalay milkiilayaasha taasoo macnaheedu noqon karo wax muhiim ah dadaalka suuqgeynta. Tusaale ahaan, shirkadaha guuleysta waxay leeyihiin bogag intaa ka badan oo kordhiya sida ay u gaareen si ay u helaan macaamiisha macaamiisha ah onlineka. Macaamiisha oo dhan shabakadda waa kuwo aad u badan in ganacsi kasta uu heli karo faa'idada siyaabaha caadiga ah ee wadista baabuurta
Kadib sameynta website-yada, waxaa jira qaar ka mid ah farsamooyinka suuq-geynta farsamooyinka kuwaas oo isticmaala dadka isticmaala - kangertech protank 1. Badankooda websaydhku waxay ku xiran yihiin suuqgeynta suuq-geynta ama goobaha kale sida Suuqa Warbaahinta Bulshada. Suuq-geynta SEO-ga ee maxaliga ah wuxuu noqon karaa kumbuyuutarka suuq-geynta oo aan kaliya samayn karin ganacsigii hanti gaar ah, laakiin sidoo kale wuxuu kordhin karaa macaamilka macaamiisha bogga internetka. Waxaa jira habab badan oo fulin kara farsamooyinka SEO Marketing Local. Marka la eego, Julia Vashneva, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamilka, wuxuu ku siinayaa inaad tixgeliso arrimaha soo socda ee SEO Marketing:
Tilifoonnada casriga ah ayaa si tartiib ah u beddelaya miisaska oo ah qalabka ugu muhiimsan ee helitaanka internetka. Ilaalintu waxay leedahay heer aad u sarraysa, iyada oo inta badan isticmaalayaasha desktop-ka (4%) ay u jeestaan ​​isticmaalka taleefannada casriga si ay u eegaan halkii kumbiyuutar. Dhanka kale, Google ayaa cusbooneysiiyey Penguin Algorithm bishii Janaayo 2017. Warbixintan waxay aragtay website-yada algorithm ee bogga bogga leh oo leh bog bogga. Intaa waxaa dheer, sameynta bogga leh bog boggaaga gacanta ah waxay ka dhigeysaa boggaaga sareeya SERPs kahor dhamaan shirkadaha kale..Marka la fulinayo Suuqa Suuq-Gaariga ee Degmada, waa lagama-maarmaan in la tixgeliyo abuuritaanka website-ka kaas oo ah mobile-ka saaxiibtinimo.
Abuuri boggaga soo degaya
Ganacsi kasta wuxuu leeyahay bog ka soo duulaya meelaha kala duwan ee gaadiidka. Bogagga soo dajinta waa meesha saxda ah ee server-ka cusub ee booqdeyaasha cusub marka ay gujiyaan link ama URL in aad website-kaaga. Qayb ka mid ah Qorshaha Nidaamka Suuq-degga ee Local Nidaamka Suuq-galka ee Nidaamka waxaa ka mid ah abuurista bogag soo-ceshad leh oo loogu talagalay waxqabadka Baadhitaanka Mashruuca Raadinta. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la ogeysiiyo baasboorka raadiyaha boodboodka si uu u muujiyo bogaga soo degaya. Calaamadeynta boggaani waxay kaa caawineysaa in aad kordhiso fursadda aad ku heli karto istiraatijiyad dhab ah.
Cadaadisku waa furaha
Marka aad dejinayso boggaaga, waxaad diiradda saartaa sameynta website kaas oo sahlan in la isticmaalo wakhti isku mid ah macluumaadka. Abuuritaanka website-yada fudud ee fudud ayaa ka caawin kara booqdaha inuu noqdo iibsasho adoo kordhinaya waqtiga xilka. Inta badan dadka martida ah waxay leeyihiin feejignaan gaaban. Qofka soo booqday ayaa ka bixi kara goobtaada haddii nidaamka helitaanka waxay u baahan yihiin waa mid adag. Dooro template naqshad shabakadeed oo fudud oo toos ah.
Waxaa jira siyaabo badan oo loo maro bogagga internetka ee laga heli karo macaamiishooda. Suuq-geynta dijitaalka ah, webmasters waxay ku xiran tahay hababka suuq-geynta ee SEO-yada kaas oo ka caawiya websitir heer sare ah ee mashiinnada raadinta SERPs. Shirkadaha noocan ahi waxay ka faa'iidaystaan ​​iyagoo helaya macaamiisha joogtada ah ee macaamiisha goobta ay ka kooban yihiin kuwaas oo ka mid ah dadka soo booqanaya. Hirgelinta xirfadaha SEO wanaagsan waxay ka dhigi kartaa shabakadaada in ay gaaraan ujeedooyin badan oo naqshad ah sida hanti suuqa iyo weliba kor u qaadista maamulka domainkaaga. Waxaad isticmaali kartaa buugan suuq geynta ah ee SEO si ay u gaarto macaamiisha badan oo online ah.